China isitayela esisha izinwele ibhulashi ifektri abakhiqizi | Yongsheng
Ukukhiqizwa kwangaphambilini ------isampula------ isiqinisekiso-Izinto------ ukuthenga-Ingxenye ------ingxenye------ Umjovo-Ikhwalithi------ ukuhlolwa-Ingxenye ------ingxenye ------ubuso------ Qeda-Ikhwalithi ------ukuhlolwa-Assembly-Quality ------ukuhlolwa-Ukupakisha.
Sinezinwele ezithandwayo nezemfashini zezinwele.
Ungakhetha ku-Colorful flower UV kagesi wokuqeda izinwele ibhulashi, i-Colourful injection yakudala yezinwele nge-nylon bristles, i-Colouring enamathela ibhulashi elimanzi nezimbobo ku-cushion, i-Colorful brush emanzi enengubo yenjoloba, i-Flower gradient UV kagesi wokuqeda ibhulashi lezinwele, i-Injection classic ibhulashi lezinwele zomqamelo, Ibhulashi lokugcona elinama-bristles nenayiloni elixubekile, Ibhulashi Elimanzi ekwakhiweni kombala we-3D wokuphrinta.
Futhi sinempahla entsha elindele ipulasitiki, ukhuni noqalo. Kuyinto yezinto ezihlanganisiwe zeBiomass. Luhlobo olusha lwento engamelana nayo eyakhiwe ngezinto ze-macromolecular kanye ne-biomass material. Njengoba okuqukethwe kwezinto ezintsha zemvelo kungaphezu kwama-50%, umkhiqizo unezinzuzo zokuvikelwa kwemvelo nekhabhoni ephansi. Futhi sinefayibha yoqalo notshani obutholakalayo.
Ukuhlambalaza ibhulashi kungathuthukisa ukulawula isitayela ngenhlanganisela yezingulube namabhulashi enayiloni. Isibambo somsila we-Tapered tapered sifaka ukuphela kokukhetha ukuhlukanisa, ukwehlukanisa, nokuthinta kokugcina. Izingulube ezimfishane ezidala ukudala ukungezwani nokukhanya futhi i-tourmaline ithuthukise i-nylon bristles ihamba kalula ngezinwele. I-Boar bristles ibhulasha ihlanza nezimo zezinwele bese isabalalisa uwoyela wemvelo wezinwele ngaphezulu kwesihlakala sezinwele.
Ibhulashi lezinwele ezimanzi lezinwele lenziwe ngezinto ezilwa ne-static, izikhonkwane ezithambile ziletha ukuqina okukhulu nokuqina. Izixazululo Perfect izinwele emazombezombe, izinkinga electrostatic futhi kulula ukuhlanza.
Langaphambilini Ngokhuni noqalo izinwele ibhulashi
Olandelayo: Mini izinwele ibhulashi elinemibalabala enamathela enjoloba, UV kagesi, ukudluliswa kwamanzi
I-Custom Bamboo Hair Brush
Qopha ibhulashi lezinwele
I-Oem Bamboo Hair Brushes
Ibhulashi lezinwele elisebenzayo
Izinkuni Zokubhoboza Izinwele
Ngokhuni Paddle Izinwele Ibhulashi